नेतृत्वको ‘प्रतिकार’ निर्देशन: आक्रमणमा उत्रिएकै हो नेकपा ? – Khabar Silo
काठमाडौं । गएको भदौ ३० गते पार्टीका दिवङ्गत नेता पोष्टबहादुर बोगटीको स्मृति दिवसका दिन पार्टी कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले ‘परिवर्तन विरोधीको प्रतिकार’ गर्न पार्टी कार्यकर्ताहरुलाई निर्देशन दिए ।दुई दिनअघि, भदौ २८ गते नेपालगञ्ज विमानस्थलमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईले विमानभित्रै खप्की खानुपरेको थियो ।उडान समयभन्दा एक घण्टा ढिलो आएको भन्दै आफूलाई भ्रष्टाचार विरोधी अभियन्ता बताउने ज्ञानेन्द्र शाहीको समूहले भट्टराईविरुद्ध विमानस्थलको रनवेमै नाराबाजी गरेका थिए । उनले ‘कहाँ मोजमस्ती गर्दै हुनुहुन्थ्यो, यात्रुलाई कुराउने ? तपाईंको मात्रै देश हो ?’ भन्दै मन्त्री भट्टराईलाई औंला ठड्याएका थिए ।
शाही पछिल्लो समय भ्रष्टाचारविरुद्ध ‘नेपालका लागि नेपाली अभियान’ चलाइरहेका छन् । सत्तारूढ पार्टीका नेताविरुद्ध ‘रूखो टिप्पणी’ गर्दै आइरहेका छन् उनी । गत जेठ १५ गते कर्णालीका पत्रकारलाई अपशब्द प्रयोग गरेको र सार्वजनिक रूपमा गाली बेइजती गरेको कसुरमा शाहीलाई पक्राउ गरिएको थियो । केही समयपछि प्रशासनको निगरानीमा रिहा पनि भएका थिए । त्यसो त सत्तारूढ दलका नेता कार्यकर्ताले शाहीलाई राजावादीको आरोप पनि लगाउँदै आएका छन् । शाहीका गतिविधि गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संविधानविरुद्ध परिलक्षित रहेको पनि सत्तारूढ दल नेकपाका कार्यकर्ताले बताउने गरेका छन् ।
अध्यक्ष प्रचण्डले शाहीका गतिविधि परिवर्तन विरुद्ध जनमत बनाउन उद्दत रहेको लख काटे । र, पार्टी कार्यकर्तालाई ‘प्रतिकार’ गर्न निर्देशन दिए ।असोज ५ गते विराटनगर विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले आफूले प्रतिकार गर्न निर्देशन नदिएको तर परिवर्तन विरोधीको प्रतिवाद गर्न ढिला गर्न नहुने तर्क गर्दै अघिल्लो अभिव्यक्तिको बचाउ गरेका थिए ।पार्टी कार्यकर्तालाई प्रतिकार र प्रतिवादको निर्देशन दिने प्रचण्ड एक्ला अध्यक्ष भने होइनन् । असोज १ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि गाणतन्त्रमाथि खतराको घण्टी बजेको बताएका थिए ।
सिंहदरबारको पुतली बगैँचामा बन्न लागेको संसद् भवनको शिलान्यास गर्दै उनले दृष्टान्त दिए, “अहिले केही प्रतिगमनतर्फ जान सकिन्छ भन्ने निरर्थक सपना देखिरहेका छन् । जबसम्म डमरुमाथि खतरा आइपर्दैन, बघिनी चुप लागेर बस्छे तर जब डमरुमाथि खतरा आइपर्छ, बघिनी चुप लागेर बस्दिन ।”
उनको अभिव्यक्ति पनि परिवर्तनविरोधीको प्रतिकार गर्नु नै भन्ने थियो । त्यसो त उनले केही समयअघि बालुवाटारमा सर्वदलीय बैठक आह्वान गरेर गणतन्त्र र संविधान खतरामा परेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका थिए ।पार्टी अध्यक्षद्वयको ‘प्रतिकार आदेश’ले अहिले नेकपा कार्यकर्तालाई आक्रमण गर्न प्रेरित गरेको र विपक्षी र विमति राख्नेहरूलाई आक्रमण गर्न हौस्याएको आभास हुन्छ ।
त्यसैको प्रमाण हो– शनिबार चितवनमा शाहीमाथि साङ्घातिक हमला ।
चितवनको चौबीसकोठीमा बहिर्गमित जनमुक्ति सेनाका लडाकु लेनिन विष्टसहित कार्यक्रम गर्न पुगेका शाहीमाथि एक समूहले आक्रमण गरेपछि नेकपाको लोकतान्त्रिक चरित्रमाथि नै शंका उब्जिएको हो ।
नेपालको संविधान भाग३, धारा१७ अनुसार ले विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, बिनाहातहतियार शान्तिपूर्वक भेला हुने स्वतन्त्रता र नेपालको कुनै पनि भागमा आवतजावत र बसोबास गर्ने स्वतन्त्रतालाई मौलिक हकमा राखेको छ । र, कानुनबमोजिम बाहेक कुनै पनि व्यक्तिलाई वैयक्तिक स्वतन्त्रताबाट वञ्चित नगर्ने बताएको छ । तर सत्तारूढ दलका नेता–कार्यकर्ता सार्वभौम नागरिकको मौलिक हक हनन् हुनेगरी प्रतिवाद–प्रतिकारमा उत्रिनु लोकतन्त्र र संविधानकै लागि खतरापूर्ण रहेको टिप्पणी हुन थालेको छ ।
आक्रमणको पछिल्लो शृङ्खला
गत भदौ २६ गते नेपाली काङ्ग्रेस बाँकेले जिल्लाको खजुरा गाउँपालिका२ मा १०६ औं वीपी स्मृति दिवसको सन्दर्भमा कार्यक्रम राखेको थियो । भदौ २४ गतेबाट आरम्भ भएको राष्ट्रिय जनजागरण अभियानअन्तर्गत दोस्रो चरणको कार्यत्रम थियो त्यो ।
कार्यक्रम भइरहेका बेला नेकपाका स्थानीय तहका कार्यकर्ता हलभित्रै प्रवेश गरेर हातपात गरे । आक्रमणबाट बाँके काङ्ग्रेस सभापति किरण कोइरालाको हातै भाँच्चिन पुगेको कांग्रेसले आरोप लगायो ।
बाँके घटनाले राष्ट्रिय रूप लियो । संसद्को बर्खे अधिवेशन चलिरहेको थियो । प्रमुख प्रतिपक्षी दलले बेल घेराउ गर्यो । दुई दिन लगातार आन्दोलन गरेपछि तेस्रो दिन आक्रमणका योजनाकार सुमन मल्ल विरुद्ध किटानी जाहेरी प्रहरीले बुझ्यो । कांग्रेसको आन्दोलन सेलाउँदै गयो ।
बाँके घटना चिसिन नपाउँदै भदौ २९ गते नेकपाका कार्यकर्ताले भ्रष्टाचारविरुद्धका अभियन्ता शाहीलाई आक्रमणको तारो बनाए ।
अघिल्लो दिन नेपालगञ्ज घटनाको सत्यतथ्य बताउन भन्दै पत्रकारलाई ललितपुरको कुपण्डोलमा निम्त्याएका थिए शाहीले । विद्यार्थी बनेर पुगेका सत्तासीन दल नेकपाको भ्रातृ सङ्गठन अनेरास्ववियूका कार्यकर्ताले सुरूमा प्रश्न सोधे । अन्तिममा आक्रमण प्रयास गर्दै लखेटे । आक्रमणबाट बच्न प्रहरीको शरणमा पुग्दा उल्टै ‘दुर्व्यवहार’को मुद्दा खेप्नु परेको शाहीको दुखेसो छ ।
त्यसपछि पनि आक्रमणको सिलसिला रोकिएको छैन ।
शनिबार भ्रष्टाचारविरुद्ध नागरिक सभा गर्न चितवन पुगेका शाहीमाथि पुन आक्रमण भयो । कार्यक्रम स्थगित गरिसकेपछि पनि शाहीमाथि साङ्घातिक आक्रमण गरिएको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा छ्याप्छ्याप्ती भएको छ । भिडियोमा फलामे रड, बाँसको भाटा बोकेका आक्रमणकारीले ज्ञानेन्द्र शाहीलाई चारैतिरबाट घेरा हालेर आक्रमण गरेको देख्न सकिन्छ । सर्वसाधारणको जिउधनको रक्षा गर्ने दायित्व बोकेको प्रहरीसमेत मूक दर्शक बनेको शाही समर्थकहरूको आरोप छ ।
चितवन घटनामा नेकपाका कार्यकर्ता नै संलग्न छन् कि छैनन् ? त्यसको स्वतन्त्र पुष्टि हुन सकेको छैन । प्रहरीले घटनाको अनुसन्धान गर्न र अभियुक्त पक्राउ गर्न चासो नदिएको शाहीको आरोप छ । शाहीले कार्यक्रमपूर्व सूचना नदिएको चितवन प्रहरी बताउँछ ।नेकपा निकट विद्यार्थी सङ्गठन अनेरास्ववियूका संयोजक ऐन महरले ‘विस्फोटक ब्याटिङ’ भन्दै देशको हित हुने काम भन्दै उक्त प्रशंसा गरेका थिए । “सिङ्गापुर र चितवनमा भएका विस्फोटक ब्याटिङ्ग दुवै देश जनता र गणतन्त्रको हितमा छन्,” सिंगापुरमा नेपाली क्रिकेट टोलीका कप्तान पारस खड्काले गरेको ब्याटिङसँग जोडेर उनले भनेका थिए ।महरको प्रतिक्रियाले पनि चितवन घटनामा पार्टीका नेताकार्यकर्ता संलग्न रहेको आरोपलाई अस्वीकार गर्दैन ।शनिबारको घटनाको तरङ्ग साम्य नहुँदै आइतबार तनहुँमा कांग्रेस नेता मीनेन्द्र रिजालमाथि आक्रमण प्रयास भयो ।
जिल्लाको रिसिङ गाउँपालिकाको भवन शिलान्यास गर्न पुगेका नेता रिजालमाथि नेकपा समर्थक, शुभेच्छुक बियरको बोतल, लाठी र घरेलु हतियारसहित आक्रमणका उत्रिएको र चार घण्टा बाटो छेकेको रिजालले बाह्रखरीलाई बताएका छन् ।आफूमाथि पटकपटक आक्रमण प्रयास भए पनि काङ्ग्रेसका स्थानीय नेताकार्यकर्ताले जोगाउन सफल भएको रिजाल बताउँछन् ।
तनहुँ घटनामा भने काङ्ग्रेसका नेताकार्यकर्ता र नेकपाका स्थानीय नेताको कुरा बाझिएको छ । नेकपाका स्थानीय नेताले रिजाललाई अवरोध नगरेको भन्दै गाउँपालिकाको केन्द्र कहाँ राख्ने भनेर विवाद चर्किएको र त्यही भुङ्ग्रोमा रिजाल परेको उनीहरूको तर्क छ ।
रिसिङ गाउँपालिकाको केन्द्र राख्ने विषयमा नेकपा र काङ्ग्रेस विभाजित छन् । स्थानीय तहको निर्वाचनमा काङ्ग्रेसले ‘क्लिन स्वीप’ गरेको गाउँपालिका भएकाले आफूले भनेकै ठाउँ (पोखरीभञ्ज्याङ्ग)मा गाउँपालिका भवन बनाउने अडानमा काङ्ग्रेस थियो ।
तर काङ्ग्रेस इतरका पार्टीले ढुङ्गागाडेमा गाउँपालिका भवन बनाउनुपर्ने बताउँदै केही दिनदेखि विरोधमा उत्रिएका थिए । नेकपा सहित दलको विरोधकै बीच आइतबार रिजाललाई शिलान्यास गर्न निम्त्याइएको स्थानीय पार्टीका नेता बताउँछन् ।
विरोधस्वरूप काङ्ग्रेस बाहेकका दलले आइतबार गाउँपालिका बन्दको घोषणा गरेका थिए । बन्दकै बीच रिजाल दमौली आइपुगिसकेको थाहा पाएपछि सङ्घर्ष समितिका संयोजक भूपालसिंह थापाको नेतृत्वमा स्थानीयले रूख ढालेर, ढुङ्ग तेस्र्याएर बाटो अवरुद्ध तुल्याएको ती नेताको भनाइ छ ।अवरोध पन्छाउँदै रिजाल शिलान्यास स्थलतर्फ अघि बढेपछि सङ्र्ष समितिले धुरी नछाडी महिला, केटाकेटी लाठीमुङ्ग्रीसहित सडकमा निकालेर अवरोध गर्न खोजिएको तर आक्रमण प्रयास नभएको नेकपा रिसिङ गाउँपालिकाले बताएको छ ।
“स्थानीयको आवाज बेवास्ता गरेर गाउँपालिका भवन शिलान्यास गर्न काङ्ग्रेसका केन्द्रीय नेता मीनेन्द्र रिजाल बोलाइएपछि विवाद चर्कन गएको हो, कसैलाई आक्रमण भएको छैन । आक्रमण गर्ने नीति पनि छैन,” नेकपाकी नेतृ भगवती न्यौपाने बताउँछिन् ।
‘आक्रमण गर्न जाने पार्टीका कार्यकर्ता हुन सक्दैनन्’
ठूल्ठूला चाडपर्वको छेकोमा भएको साङ्घातिक आक्रमणले पार्टीलाई चिन्तित बनाएको सचिवालय सदस्य झलनाथ खनाल बताउँछन् । “नेपालजस्तो शान्तिप्रिय देशमा कसले यस्तो घटना घटाइरहेको छ । कहाँबाट भइरहेको छ, सरकारले यसको खोजी गर्नुपर्छ,” उनी भन्छन् ।
नेकपाकै नेताकार्यकर्ता आक्रमणका उत्रिए भनेर विपक्षीले आरोप लगाइरहेको छ । कतै त प्रमाणित नै भइसकेको छ नि ? भन्ने बाह्रखरीको जिज्ञासामा खनाल थप्छन्, “आक्रमण गर्न जाने नेकपाकै कार्यकर्ता हुन् भनेर प्रमाणित भएको छैन । आक्रमण गर्न जाने पार्टीका कार्यकर्ता हुन्छन् जस्तो पनि मलाई लाग्दैन् । यदि नेकपाकै कार्यकर्ता संलग्न रहेको प्रमाणित भएमा कारवाही गर्नुपर्छ ।”
केही दिनअघि पार्टी अध्यक्षले नै प्रतिवाद–प्रतिकार गर्न निर्देशन दिनुभएको थियो, त्यसैको असर त होइन ? भन्ने अर्को जिज्ञासामा खनालको उत्तर थियो, “विलकुलै होइन । कसैलाई प्रतिकार गर्न निर्देशन दिइएको छैन ।”